Wokuqala Jag yesikolo kwi-Russia waba evuliweyo kwikota yokuqala XVIII century. Umhla yayo radio sibonwa ukuba abe APR.
Yenziwe ngalo esikolweni kwakunjalo ngexesha nyathelo Emperor Upetros Omkhulu, owaye a reformer kwi abaninzi kwiindawo zethu ubomi. Kwi- ekhutshwe a ummiselo wayalela ukuba recruit abantu literate cadets ye-Military Ekholejini. Kukho kokuba bathethe kwi-nzulu ka-zincwadi amatyala. Emva abanye xesha, yena ekhutshwe a ummiselo ngawo eziliqela bafana babethunyiwe ngaphesheya ukuba bafunde nzulu Sciences.
Kwi-Russian Empire military abaqondisi-mthetho walungiselela Alexander military umthetho Academy kwi-St
Marengo. Kwaba ihlole uqeqesho amagosa umsebenzi military-matyala Kwicandelo.
Ngokubhekiselele kule esikolweni waba kwi- kwi-i-amagosa — zincwadi zangaphakathi iintlobo kwi College. Ngowe- yenzekile i-reformation ezi iintlobo kwi-Military Academy, umthetho. Ukususela oku esikolweni sathiywa ukunika imbeko Emperor Alexander III. Kule Academy wathabatha amagosa ukuba udidi ka-ukapteni kwi-izintlu abathe wasebenza ingabi ngaphantsi kweminyaka emine.
Kwi-Soviet phinda-phinda, uqeqesho military abaqondisi-mthetho waba lwenziwa ngowe-Military-isemthethweni Academy we umsebenzi-peasant red Umkhosi, ebekwe kwi-Moscow. Kwaba ephezulu military yesikolo ka — Armed imikhosi i-USSR kwi-ixesha ukususela ngo- ukuya. Oko ezilungiselelwe amagosa kuba military tribunals kwaye military abatshutshisi.
Ngowe, Military umthetho Academy waba abolished. Uqeqesho amagosa-abaqondisi-mthetho ukususela kweli xesha kwakukho i-military kwaye umthetho faculty ngomhla Military ezopolitiko Academy imeni V. I. Lenin.
Ngowe, ukudibana ye-military-isemthethweni faculty ye-Military Institute of langaphandle iilwimi. Oku kwakhokelela ukumiselwa kwebandla i-Military Institute, esibizwa ilungiselela specialists kuba umsebenzi komthetho kwaye iinkonzo zobuntlola ye-Soviet Union. Kamva Military Institute, kwaba kugqitywe ukuba ufuna Military Institute. Oku Institute functioned i-faculty umthetho. Oko wathwalelwa ngaphandle komhlaba ngendlela ezintathu enkulu kwiindawo: matyala, prosecutorial, investigative kwaye isemthethweni advisers.
Ngo, esikolweni wafumana Ngezifundo isimo. Oko wenziwe ngokuba Military Ngezifundo Zokulungiselela ka-yokhuselo.
Owona military udidi military abaqondisi-mthetho kwi-Irashiya lelona udidi Jikelele-i-polonaise lobulungisa
IFOWUNI LUHLOMLE KUWO LAWYER